विनोदविक्रम केसी समकालीन युवा पुस्ताका सशक्त कवि मानिन्छन्। अन्तराष्ट्रिय नारी दिवसको अवसरमा उनका...
अमेरिकीहरू त धरणीधरको व्यक्तित्व देख्नासाथै झस्किए। लामालामा दाह्री पालेका मानिस। उनीहरूले यस्ता...
केटाहरुले जिस्क्याउने आँटै गरेनन् : फुपू
फुपू ल्हामू खत्री १२औँ सागमा जुडोबाट स्वर्ण जित्ने खेलाडी हुन्। उनको स्वर्ण, जुडोमा २१ वर्षपछि नेपालले पाएको अर्को सफलता बन्यो। यही सफलताले उनलाई यस वर्षको स्पोर्टस अवार्डमा उत्कृष्ट महिला खेलाडीको...
मुटु उपचारमा नयाँ फड्कोः अब हृदयाघातमा भत्केका तन्तु पुनर्जीवित हुने
मुटु रोगबाट पीडित व्यक्तिहरूलाई खुसीको खबर छ। एक नयाँ अध्ययनअनुसार शल्यक्रियाको समयमा मुटुमा स्टेम सेल प्रत्यारोपण गर्दा मुटुको क्षतिग्रस्त तन्तुलाई पुनर्जीवित गर्न सकिने भएको हो।
हिटलरको प्रचार मन्त्रीलाई आइजेन्स्ताइनको खुलापत्र– गोयबल्स, तिमी बञ्चरै चलाऊ!
सर्गेई आइजेन्स्ताइन ‘ब्याटलसिप अफ पोतेम्किन’, ‘अक्टुबर’, ‘ओल्ड एन्ड न्यु’ जस्ता विश्वप्रसिद्ध सिनेमा बनाएका रुसी निर्देशक हुन्। उनलाई उदाहरणका रूपमा अघि सार्दै जर्मनीका चलचित्रकर्मीहरुलाई प्रशिक्षण...
शर्मिलाको सोह्र वर्ष लामो सत्याग्रहः प्रेमले तोड्यो कि परिबन्दले?
नेपालमा डाक्टर गोविन्द केसीको शृंखलाबद्ध अनसन चर्चामा छँदैछ। चिकित्सा क्षेत्रका विकृति अन्त्यको माग गरेका डा. केसीले सरकारसँग आठौँ पटक सम्झौता गरेर पन्ध्रौं दिनमा अनसन तोडेको तेस्रो दिन (मङ्गलबार)...
भाइभारदारलाई जङ्गबहादुर राणाको अन्तिम पत्र– ‘ब्रिटिस सरकारसँग दोस्ती कायम राख्नू!’
बृटिससर्कार अती ठूला गवरमेन्ट हुन् उनका राजमा साना साना राजाहरू पनि षुसि सँग रह्याका छन् बृटिसले हिन्दुस्तानका राजाहरूलाई उडाउँ भन्या यकै वर्षमा साफ गर्न राखिदियाको र मजहवमा केही जोर नगर्‍याको...
यहाँ मात्रै हो र, फिजीको जङ्गलसम्म गाइन्छ नेपाली गीत!
पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरणपछि जुन मानचित्र बन्यो, त्यसलाई अहिले हामी नेपाल भन्छौँ। नेपाल शब्दले तीन अर्थ दिन्छः पहिलो– नेपाल खाल्डो, दोस्रो– बृहत्तर नेपाल र तेस्रो– सुगौली सन्धिपछि सङ्कीर्ण भइआएको...
पिटर जे कार्थक
रामलाल को हुन्, जसले पाए मदन पुरस्कार?
अन्ततः २०७२ सालको मदन पुरस्कार रामलाल जोशीले पाए। उनको कथा संग्रह ऐना मनोनयनको उत्कृष्ट सातमा परेपछि नेपालखबरले सोधखोज गरेको थियो। राजधानीवासीले त्यसअघि खासै नाम नसुनेका र मिडियामा पनि नछाएका...
स्मरण शक्ति बढाउने नौ तरिका
कसैकसैलाई लाग्छ– मेरो स्मरण शक्ति कमजोर छ। कसैलाई लाग्छ– आजभोलि मैले धेरै बिर्सन लागेको छु। के स्मरण शक्ति भनेको क्रमशः कमजोर हुँदै जाने कुरा हो?
जो विज्ञानमै जीवन बिताउन चाहन्छन्
आकाशमा घुइइइँ... गर्दै मानवरहित विमान उड्यो। एकैछिनमा ड्याम्म तोप पड्कियो। नजिकैबाट हेर्नेको सातोपुत्लो उड्यो । मानवरहित विमान (ड्रोन) उडाउने राजन गुरुङ थिए। उनले फ्याँकिएका सामग्रीबाट ड्रोन बनाएर...
चरिरहेका गाईवस्तु दौडादौड गरे। अगाडिका दुई र पछाडिका दुई खुट्टाले पालैपालो उफ्रदै कराउन थाले । कतैबाट आएको घुनुनुनु...आवाजले ठूलै आतंक ल्यायो । आवाज नजिकिँदै झनझन् चर्को हुँदै गयो । गाईबस्तु...
३३ वर्ष पहिले निर्मल लामाले खगेन्द्र संग्रौलालाई पत्र लेख्दै भने - 'यसलाई खप्की नठानियोस्!'
तीन दशकअघि तत्कालीन नेकपा (चौम)का नेता निर्मल लामाले आफ्नो समीक्षाको आलोचना गर्ने खगेन्द्र संग्रौलाबारे लेखेको प्रतिवाद प्रस्तुत छः
'पाइनँ खबर'- त्यहीबेला गीत सुनेर आमाहरुले चारसय रुपैयाँ दिए
हरिदेवी कोइराला लोकप्रिय गायिका हुन्। उनका सयभन्दा बढी लोक तथा दोहोरी एल्बम सार्वजनिक छन्।
यसै साता रिलिज भएको 'पोकेमन गो' नामक भिडियो गेमले संसारको ध्यान खिचेको छ। भर्चुआलिटी र रियालिटीको गजबको मिश्रण यो गेममा देख्न सकिन्छ। गेमको अनौठो विशेषता भनेको खेलाडी वास्तविक स्थानहरुमा हिँड्दै...
गर्मी छ, यस्तो पहिरन लगाउँदा ठिक हुन्छ
गर्मीको मौसममा कस्ता लुगा लगाउने, कस्ता कुरा खाने, गर्मीबाट कसरी जोगिने भन्ने चिन्ता सबैलाई हुन्छ । गर्मीको बेला कस्ता पहिरन लगाउँदा फाइदा हुन्छ त हेरौँ ७ उपाय :
साहित्यकार पारिजातको प्रेम सम्बन्ध र यौन जीवनबारे बजारमा अनेक हल्ला–खल्ला चल्थे र चलिरहेका छन्। आफ्नो प्रेम सम्बन्ध र यौन–अनुभवबारे पारिजात आफैले चाहीँ के भनेकी छन् त? पढ्नुहोस्– डा. महेश मास्केलाई...
अभि सुवेदीलाई कुनै एकै पदले परिचय दिन सजिलो छैन। उनी गन्यमान्य प्राध्यापक हुन्। ख्याती कमाएका समालोचक हुन्। जसरी साहित्य क्षेत्रमा उनको प्रतिष्ठित नाम छ, त्यसरी नै रङ्गकर्ममा पनि उनको स्थान प्रभावी...
फेवाताल नजिकै एउटा जहाज थपक्क बसेको छ। वरिपरि अग्ला–अग्ला मकैका बोट छन्। जहाज उड्दा–उड्दै भर्खरै मकैबारीमा ल्यान्ड गरेजस्तो देखिन्छ। यस्तो दृश्य नमस्ते एयर नान्दोज रेस्टुरेन्टको हो।
सहर–बजारमा बिहानै सडकमा दौडिरहेका झुण्डका झुण्ड मान्छेहरू देखिन्छन्। बिस्तारै बिस्तारै प्रौढ मान्छेहरूमा बिहान हिंड्ने चलन संस्कारका रूपमा विकसित हुँदै गइरहेको छ। मर्निङवाक गर्ने मानिसहरूको संख्या...
लेखराज भट्टको मेहन्दी–मोह
माओवादी केन्द्रका नेता लेखराज भट्ट परैबाट चिनिन्छन्, किनभने अग्लो ज्यानका भट्टको कपाल सदावहार खैरो हुन्छ । खैरो, त्यो पनि गाढा! देशको राजनीति पञ्चायत, बहुदल, जनयुद्ध, गणतन्त्र जस्ता अनेक परिवर्तन...